Wasaradda difaaca waxay ayey ka ogeyd qorshaha FOI - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasaradda difaaca waxay ayey ka ogeyd qorshaha FOI
La daabacay torsdag 4 september 2014 kl 10.17
Shalay ayaa programka Uppdrga Granskning ee ka baxa tv:ga SVT kashifey in heyadda qaabilsan tacliinta difaaca, FOI, la gashay wadoxaajood sir ah diktatoorka Shiina, ujeedada waxaajoodka sirta ah ayaa ahaa sidii FOI uga iiban laheyd Shiina program kobiyuuter oo magaciisa la yiraahdo Edge.
Programkas oo loo isticmaali karo hubka wax gumaada ee niyukleerka. FOI waxay la gashay wadoxaajoodka Shiina iyada oo weliba dalkas saaran yahay cunoqabatayn caalami ah oo dhanka hubka ah.
FOI waxay wadoxaajoodkan u adeegsatay sida ay muujineyso kashifaada Uppdrag granskning jamaacadda KTH.
Kashifaadan waxaa shalay jawaab wasiiradda difaaca Karin Enstöm.
– Haa, sidaan horey u sheegayba waxaan kulan la yeeshay maareeyaha heyadda FOI, Waxuuna iihubiyey in aysan sal iyo raad toona laheyn eedeyntan, aysana jirin wadoshaqeyn aysan dowladda waxbo ka ogeyn, ayey tiri.
Balse maanta ayey soo baxeen macluumad cusub oo ku saabsan arrintan.
Wasaaradda difaaca wax ayey ka ogeyd wadoshaqeyntan FOI iyo Shiinaha weyna ogaalaatay in FOI shiinaha u gacan geliso programkan Edge iyada oo loo adeegsanayo Jmacadda KTH. Muddo lix billad ka hor inta wadoshaqeyntan uusan qalinka lagu duugin ayaa loo diray wasaaaradda ay quseyso cosdi ogalaansho ah in Jamacadda KTH ruqsadeyso isticmaalka Edge dalka Shiinaha, sida uu muujineyso macluumadka ee arrinkan la xiriira.